Kahor kulanka Manchester United, Wijnaldum oo fariin digniin ah u diray saaxiibadiis Liverpool – Gool FM
(Premier League) 14 Dis 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Holand Georginio Wijnaldum ayaa kaga digay saaxiibadiis Reds kulanka ay Axada soo aadan garoonka Anfield kula ciyaari doonaan Manchester United.
kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa ku dagaalami doona Axada soo aadan kulan ka tirsan kulamada 17-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaaareedkan.
Wijnaldum ayaa ka hadlay dhowr arimood ee ku aadan kooxdiisa Liverpool, gaar ahaan kulanka soo aadan ay la ciyaari doonaan kooxda Manchester United, iyo mustaqbalka kooxdiisa Liverpool xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League.
“Uma maleenayo inay jirto koox aan laga badin Karin, balse sida ay ila tahay in wax walba ay ku xiran tahay tababaraha, kaasoo awooda inuu cagta noo saaro wadada saxda ah”.
“Waan ka war qabnaa in ay jirto shaqooyin badan ee la doonayo inaan qabano, waxaa nasugaya kulamo badan ee adag aan ciyaari doono”.
“Kulanka soo socda ee aan la ciyaari doono kooxda Manchester United, ma ahan marnaba kulan sahlan, xili ciyaareedkii hore waxay dhanka kala sareynta ee horyaalka Premier League kaga dhameysteen booska labaad, waxayna markale xili ciyaareedkan raadinayaan kacdoon cusub”.
Kooxaha Vidi FC Vs Chelsea oo barbaro ku kala baxay kulankooda ugu dambeeyay heerka group-yada ee tartanka Europa League